Uhlobo lweDiesel Generator yokuSebenza ngobuchwephesha kunye noMatshini ngokuthe ngqo | Uthandile
Iseti yejenereyitha yohlobo lwenqwelo erhuqwayo inokwahlulwa-hlulwa iseti yokunyusa isithuthi esine-tricycle, iseti yejenereyitha ezine, isikhululo samandla eemoto, isikhululo samandla erhuqwayo, isikhululo samandla esineengxolo eziphantsi, isikhululo samandla esitshixo, isithuthi sobunjineli, njl.
Ukutsalwa: ukwamkela hook ehambisekayo, 180 ° turntable, steering bhetyebhetye, ukuqinisekisa ukhuseleko xa uqhuba.
Elekhtrons: Kukho ujongano brake umoya kunye nenkqubo brake ngesandla-ezisebenzayo ukuqinisekisa ukhuseleko ngexesha uqhuba.
1. Ukusebenza kwengxolo ephantsi, umda wenkunkuma umda we-75dB (A) (1m kude neyunithi).
2. Uyilo lulonke lweyunithi ludityanisiwe kulwakhiwo, lincinci ngevolumu, inoveli kwaye inesimo esihle.
3. Isikhuseli sothotho lwemiqolo emininzi esingafaniyo nesigqubuthelo sokugquma isandi.
4. Uhlobo lokunciphisa ingxolo olusebenzayo oluninzi lwamajelo amaninzi kunye nokukhutshwa, ukungena kunye nokukhupha amajelo omoya, ukuqinisekisa ukusebenza kwamandla okwaneleyo kweyunithi.
5. I-silencer enkulu yokuthintela impedance.
6. Isitshisi esikhulu seoyile.
7. Ipleyiti ekhethekileyo yokuvula ngokukhawuleza yokugcinwa ngokulula.
"Musa ukusebenza" okanye iimpawu zesilumkiso ezifanayo kufuneka zixhonywe kwiswitshi sokuqalisa okanye i-lever ngaphambi kokugcinwa okanye ukulungiswa kweseti yejeneretha.
Sukuvumela abasebenzi abangagunyaziswanga kufutshane ne-injini ngelixa iseti yejenereta igcinwa okanye ilungiswa.
Cinezela iqhosha lokumisa likaxakeka kwiphaneli yokulawula yeseti yejeneretha, kwaye isitshixo sokuvelisa umbane kufuneka sikwi-OFF (OFF).
Ngokweemfuno zeemeko zokusebenza, xa ungena kwindawo yokufaka iseti yomvelisi, isigcina-ntloko kufuneka sinxitywe, kwaye amehlo okhuseleko kunye nezinye izixhobo zokukhusela kufuneka zinxitywe xa kukho imfuneko.
Nxiba indlebe ukhuseleko xa uqhuba i-injini kwindawo etywiniweyo ukuthintela ukonakala kweendlebe Musa ukunxiba iimpahla zokhuselo kunye nobucwebe emsebenzini, ezinokuncanyathiselwa kwindawo yolonwabo okanye ezinye iinjini.
Qiniseka ukuba onke amakhaka okanye ii-hood zikhona kwi-injini.Lumka xa usebenzisa zonke iiarhente zokucoca.Ungagcini izisombululo zolondolozo kwizikhongozeli zeglasi, njengoko izikhongozeli zeglasi zithande ukonakala.
Xa enye yezi meko zilandelayo isenzeka, ixesha lokutshaja livunyelwe ukuba landiswe ngokufanelekileyo:
(1) ixesha lokugcina ibhetri lingaphezulu kweenyanga ezi-3, kwaye ixesha lokutshaja linokuba ziiyure eziyi-8; (2) iqondo lobushushu kokudlula lihlala ngaphezulu kwe-30 ° c (86 ° F) okanye ukufuma okuhambelana kuhlala ngaphezulu kwe-80%, kwaye ixesha lokutshaja ziiyure ezingama-8.
(3) Ukuba ixesha lokugcina ibhetri lingaphezulu konyaka omnye, ixesha lokutshaja linokuba ziiyure ezili-12.
(4) Ekupheleni komgca wokutshaja, jonga ukuba inqanaba lolwelo le-electrolyte lanele na, kwaye yongeza i-electrolyte esemgangathweni kunye nomxhuzulane ochanekileyo (1: 1.28) xa kukho imfuneko.
Xa ugcwalisa ibhetri, qala uvule isiciko sokucoca ulwelo okanye ikepusi yebhetri, kwaye ujonge inqanaba le-electrolyte, kwaye uhlengahlengise ngamanzi acociweyo xa kukho imfuneko.Ukongeza, ukuthintela ukuvalwa kwexesha elide kwebhetri yongcoliseko lwegesi ayinakho Ukukhutshwa ngexesha kunye nokuthintela ukudodobala kwamathontsi amanzi ngaphakathi kudonga oluphezulu lweseli, kufuneka kuhlawulwe ingqalelo ukuvula umoya okhethekileyo ukulungiselela ukujikeleza okufanelekileyo komoya.
Egqithileyo 5kw ukuwelda udizili generator iseti
Okulandelayo: I-15kva-500kva evulekileyo / ethe cwaka kwiNdalo yeeJenereyitha zeGesi
Uhlobo lweDiesel Generator ehambayo / erhuqwayo
Uluhlu lwaMandla I-10KVA-500KVA
I-Voltage 220 / 380V, 230 / 400V, 110 / 220V, 240 / 415V, 254 / 440V, 277 / 480V
Injini ngeCummins, Perkins, Doosan, Wandi, Kubota, Yanmar, Isuzu, njl.
Enye into I-Leroy somer, iStamford, iMarathon, njl.
Umlawuli I-Deepsea, iComap, iSmartgen, njl.
Umephuli wojikelezo ABB / SCHNEIDER, njl.
Chwetheza Vula / Cwaka
Itanki yezibaso Itanki ephezulu, iSiseko seTanki, iTanki lamaFutha laNgaphandle lemihla ngemihla
Iimveliso zokuxhasa ezikhethiweyo Uhlobo olushukumisekayo / lwenqwelomoya yeDiesel Generator / Inkqubo yokuvumelanisa inkqubo yokuTshintshela ngokuzenzekelayo / iTanki loMthwalo weSuku
Umda wokubonelela wenkunkuma
1. Injini: Injini entsha kraca.
2. Enye into: Ibhanti entsha engenabhrashi, engenakuthwala, IP23, H iklasi yokugquma.
Isiseko sesiseko: Isakhelo sesiseko sesitishi somsebenzi onzima.
4. Iradiyetha: Kunye noonogada.
5. Isidambisi esingcangcazelisayo I-vibration damper phakathi kwe-Injini / i-Alternator kunye nesakhelo sesiseko
6. Umophuli: 3-pole imveliso wesekethe yesekethe ngokwesiqhelo, izibonda ezi-4 zokhetho
7. Umlawuli: Iimodeli ze-Deepsea, iComap okanye iSmartgen, njl.
8. Umthulisi: Heavy umsebenzi mveliso uhlobo silencer kunye zeenkomo bhetyebhetye, ingqiniba.
9. Ibhetri: IVarta Brand, amandla aphezulu atywinwe simahla ibhetri c / w iintambo zebhetri.
10. Itanki yezibaso: I-8 yeetanki zepetroli okanye i-customized
11. Izixhobo zokwenza izixhobo kunye neencwadana: Izixhobo zexabiso lesiqhelo kunye nokusebenza / ukugcinwa / iincwadana ezigcweleyo zoMvelisi / Injini / enye into / Iphaneli yokulawula, njl